July 2018 – aishworya
डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा धर्ना, गिरफ्तारी, सामूहिक सत्याग्रह, प्रदर्शन-हाम्रो दैनिकी जस्तै बनेको छ यतिवेला । यसलाई इङ्गित गर्दै एकजना सत्ताधारी मित्रले कमेन्ट गरे। ‘गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा तिमी पनि त प्रमुख सल्लाहकार थियौ । त्यतिवेला माग पुरा नगर्ने अहिले के को नौटङ्की ! गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा डा. केसीको आठौं अनसन सकिएको १ महिना पुगेको
विश्वका जुनसुकै देशमा बसे पनि मानिसका मौलिक हक, सहज तरिकाले दैनिक जीवन गुजारा गर्ने इच्छा र जनसरोकारका बिषयहरु करिब उस्तै हुन्छन् । मानिस जहाँ बसे पनि, जसरी बसे पनि सबैलाई सुख, समृद्धि र विकास चाहिएको हुन्छ । विश्वका हरेक देशमा बस्ने मानिसलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने चाहना हुन्छ । मानिसका लागि यो कुनै नौलो बिषय
१० साउन, काभ्रे । जिल्लाको भकुन्डेबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस बिहीबार बिहान दुर्घटनामा परेको छ । बा ३ ख ८१५५ यात्रुबाहक बस धुलिखेल बेजिङ प्लान्टनजिकै दुर्घटना हुँदा २८ जना यात्रु घाइते भएको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार, केही घाइते घर फर्केका छन् भने केहीको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस